ဒီလိင်ဂိမ်းကစားနည်းဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့အခါမှာနေ့တိုင်းလာရောက်လည်ပတ်သူအများအပြားရှိမယ်ဆိုတာမသိခဲ့ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ဂိမ်းတွေရဲ့အခြေခံအမျိုးအစားတွေ၊တချို့လိင်ကွင်းတွေ၊ရုပ်ပြောင်ဂိမ်းတွဲတွေ၊စာတိုဂိမ်းတွဲတွေ၊စာတိုဂိမ်းတွဲတွေ၊စာရှည်တွေနဲ့စတန့်ပြကွက်တွေအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးအနည်းငယ်သာထည့်သွင်းထားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုဖြတ်ပြီးပြိုကျတိုင်းဧည့်သည်သူရေးထားသည်ဟုခံစားရသည့်အခါတိုင်းပြန်လာခဲ့သည်။ ပြီးတော့နောက်လာမယ့်ဧည့်သည်အတူတူပြုကြ၏ကျနော်တို့အသစ်ဂိမ်းများကိုတောင်းဆိုစောင့်ရှောက်သောအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တောင်းဆိုမှုများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးအပတ်တိုင်းစုဆောင်းမှုတွင်ဂိမ်းအသစ်များထပ်ထည့်သည်။, စုဆောင်းခြင်းကြီးပြင်းခြင်းနှင့်ယခုအခမဲ့တိုက်ခိုက်ခံရညစ်ညမ်းဂိမ်းကိုသင်အခမဲ့ကစားနိုင်သောအကြီးမားဆုံးနှင့်အများဆုံးကွဲပြားခြားနားအရည်အသွေးညစ်ညမ်းဂိမ်းစာကြည့်တိုက်များ၏တဦးတည်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းဒါအရည်အသွေးစေသည်? မးခ်င္ေမးမယ္။ ကောင်းပြီနှစ်ခုအဓိကအရာ။ ပထမဦးစွာကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစုဆောင်းမှုအတွက်ဂိမ်းများကိုသာထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်၊ဂရပ်ဖစ်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်၊ရွေ့လျားမှုအင်ဂျင်သည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးဂိမ်းကစားခြင်းသည်ရှုပ်ထွေးသည်၊စိတ်ကြိုက်နှင့်လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ခွင့်ပြုသည်။ သို့သော်အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာဂိမ်းများ၏လက်ဝါးကပ်တိုင်ပလက်ဖောင်းရရှိနိုင်မှုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွန်ပျူတာနှင့်မိုဘိုင်းနှစ်ခုလုံးတွင်ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုကမ်းလှမ်းသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောအချိန်တိုအတွင်းသစ္စာစောင့်သိသောကစားသမားများစွာကိုစုဝေးစေပြီးလည်ပတ်မှုစနစ်ကိုဖြောင့်မတ်နေပါစေ၊ဘရောက်ဇာတွင်သူတို့အသုံးပြုသောဘရောက်ဇာတွင်မရှိပါ။, ပြီးတော့ဒီလိုဂိမ်းကြီးတွေရှိတဲ့ဒုတိယအကြောင်းရင်းကဆိုက်ပေါ်မှာသူတို့ကိုမတင်ခင်ငါတို့အားလုံးကစားတဲ့အချက်ပဲ။ နည္းပညာပိုင္းအရအိုေကတယ္လို႔ေျပာလို႔ရေပမယ့္ဂိမ္းအေတြ႕အႀကံဳနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကိုစမ္းသပ္ၿပီးအာ႐ံုစူးစိုက္မႈနဲ႔ ကစားသမားေတြကိုတြန္းအားေပးႏိုင္စြမ္းကိုလည္းစမ္းသပ္ပါတယ္။ ဂိမ်းမလွန်ပါဘူးဆိုရင်ကျနော်တို့ရိုးရှင်းစွာစုဆောင်းခြင်းထဲမှာမပါဝင်ပါဘူး။ ဒါကကျနော်တို့ရှိသည်တစ်ခုတည်းသောလျှို့ဝှက်ချက်ပါပဲ။ အခုတော့ရဲ့စုဆောင်းမှုမှာကြည့်ကြရအောင်။
ရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း,ငါတို့ပထမဦးဆုံးစတင်ခဲ့သောအခါ,ငါတို့သည်လိင်ဃအပေါ်ဤစုဆောင်းမှုကိုအခြေခံသည်။ ကျနော်တို့အများအပြားယောက်ျားတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်-နှင့်-ထွက်အမျိုးအစားအဘို့ဤအရပ်၌လာကြောင်းကိုငါသိ၏။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ကြက်သီးထချင်ကြဘူး,သူတို့ရဲ့ဇာတ်ကောင်တက်အဆင့်သို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူကောင်းစွာတိကျမ်းစာ၌လာသည်ပုံပြင်များပျော်မွေ့. သူတို့ကပဲသူတို့စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်သူငယ်၏နှင့်အတူအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုညစ်ညမ်းချင်တယ်။ ကျနော်တို့လူတိုင်းသည်ဤဘူမိဗေဒ၏စိတ်ကြိုက်မီနူးနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အိပ်မက်၏ဆယ်ကျော်သက်သို့မဟုတ်မီယာမှအခွင့်အလမ်းပေးပါ။
သို့သော်ငါတို့သည်လည်းတစ်ဦးစွဲငြိဖွယ်ရာများနှင့်ပြည့်စုံညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုခံစားသူတို့ရဲ့အချိန်ယူချင်သူကိုယောက်ျားတွေများအတွက်ပုံပြင်များနှင့်အတူဂိမ်းရှိသည်။ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်၏ဂိမ်းများနှင့်အတူဇာတ်လမ်းနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကိုသွားနိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်စာသားအခြေပြုဂိမ်းတွေနဲ့ပဲဇာတ်လမ်းကိုသွားနိုင်ပါတယ်။ အဓိကခြားနားချက်မှာဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြစ်သည်၊ထို့ကြောင့်အကယ်၍သင်သည်ဗီဒီယိုဂိမ်းကိုဖတ်ရန်ထက်ဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုကစားလိုလျှင်သင်သည်လိင်ဂိမ်းများကိုသွားသင့်သည်။, ဒါပေမယ့်သင်ကဂိမ်းကစားသူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သင်ကစားနေတဲ့ရှုထောင့်ကနေအဓိကဇာတ်ကောင်နဲ့ခွဲခြားသိမြင်စေမယ့်အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ခုကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့စာသားအခြေပြုဂိမ်းတွေကသင့်အတွက်ပါပဲ။
အဲဒီမှာထိုင်နေနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်စိတ်တော်ချင်သည့်အခါရုံညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များကြည့်ရှုသင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်အတူတက်ရှုပ်ထွေးပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူအချိန်ပိုမိုစွဲငြိဖွယ်ရာများနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစေရန်လွတ်လပ်မှုနှင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရဘယ်မှာဤဂိမ်းတွေထဲကကစားလာကြ၏။ သင့္ရဲ႕ေသြးလည္ပတ္မႈကိုေကာင္းမြန္ေစၿပီးေသြးလည္ပတ္မႈကိုေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်မှာလိင်ဂိမ်းကစားခြင်းလိင်ပြွန်အပေါ်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ရုံကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။ ကျနော်တို့အဘယ်သူမျှမတာဝန်ခံနှင့်အတူအားလုံးအခမဲ့တိုက်ခိုက်ခံရညစ်ညမ်းဂိမ်းများကိုပူဇော်နှင့်မျှမမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူ,သင်ရုံကြည့်စတင်,သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဂိမ်းကောက်,ကစားထိမှန်ပြီးတော့သင်သည်သင်၏ဘရောက်ဇာကိုအတွက်ဂိမ်းကစားပျော်မွေ့. လိုပဲ!